अपमान स्विकार्नुपर्थ्यो ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
छावाको चिप्लेटी !
वैशाख २१, २०७६ किरण पाण्डे
चार वर्षअघि चितवन जाँदा अजंगको शरीर भएको हात्ती पहिलोचोटि देखेको मेरो छोराको मस्तिष्कमै हात्तीको विशेष छाप छ  । त्यसपछिका दिनहरूमा यात्रामा निस्किँदा चितवन सौराहा मेरो पहिलो गन्तव्य बन्न थाल्यो  ।
उसलाई यतिसम्म छाप पर्‍यो कि दसैंमा टीका लगाउँदा पनि हात्ती भएको नोट चाहिने ! खेलौना पनि हात्ती नै किनिदिनुपर्ने ! स्कुलका किताबका पानामा कभर पनि हात्तीकै फोटो । र, कार्टुनमा पनि हात्ती नै !
चितवन जिल्लाको सौराहा काठमाडौंबाट एक सय पचास किलोमिटरमा पर्छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्ने सौराहामा सयौं प्रजातिका चारचुरुङ्गीका साथै दुर्लभ एक सिंगे गैंडा र पाटेबाघ पनि पाइन्छ । सौराहामा हात्ती हेर्ने तीन तरिका छन् । एउटा हात्ती सफारी, दोस्रो हात्तीसँग स्नान र तेस्रो हात्ती प्रजनन केन्द्रको भ्रमण ।
एक साताअघि हाक्तीका त्रियाकलाप अवलोकन गर्ने मुख्य स्थानका रूपमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्र पुग्दा हात्तीका पाँचवटा छावा हुर्किइरहेका थिए । तिनैमध्येको एउटा छावा भने नजिकैको हिले–पोखरीमा खेल्न थाल्यो । हिलो पानी सुँडले झिकेर फालेपछि ऊ हिलोमा छिर्‍यो र खेल्न थाल्यो । मान्छेकै बच्चाजसरी हिलोमा चिप्लेटी खेल्न थाल्यो । माथिबाट तल चिप्लिएर झर्ने अनि फेरि माथि जाने गर्न थाल्यो । सबैजसो पर्यटकहरू यही छावाको क्रियाकलापमा झुम्मिए ।
करिब १५ मिनेटपछि नजिकै रहेकी उसकी आमाको आवाज आयो । यो उसले आफ्नो बच्चालाई बोलाएको संकेत रहेछ । जीउभरि हिलोको पत्र बोकेर ऊ आफ्नी आमाको छेउमा गयो । चितवनको बढ्दो गर्मीमा उसका लागि दुइटा शीतल थिए– जीउमा टाँसिएको हिलो र आमाको छाया ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ १०:०४